libtorrent 2.0 vhezheni inotyora kuenderana uye kunonoka WebTorrent | Linux Vakapindwa muropa
Kuunzwa kwe vhezheni huru yeraibhurari libtorrent (inozivikanwa zvakare se libtorrent-rasterbar), ichisvika kune yayo nyowani vERSION 2.0, iyo inopa kuita kweBitTorrent iyo inoshanda maererano nekushandisa ndangariro uye kushandiswa kweCPU.
Mune iyi vhezheni itsva yakaburitswa shanduko dzinoitwa kune algorithm yakashandiswa SHA-1 kusvika SHA2-256, izvi nekuti yekutanga ine mamwe matambudziko, iyo Shanduko yekusunga yakaparadzaniswa hashi miti kune yega yega faira nekushandisa uye zvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive raibhurari, iwe unofanirwa kuziva kuti inoshandiswa nerukova vatengi senge Mafashama, qBittorrent, Folx, Lince, Miro uye Flush (kuti isazovhiringidzwa neimwe raibhurari raibhurari inoshandiswa neRTorrent). Iyo libtorrent kodhi yakanyorwa muC ++ uye inoparadzirwa pasi peBSD rezinesi.
Shanduko huru mu libtorrent 2.0
Mune ino nyowani yakaburitswa vhezheni yeretorrent 2.0 inomiririra kuwedzera kwekutsigirwa kweBitTorrent v2 protocol, iyo inofamba ichibva pakushandiswa kweSHA-1 algorithm, iyo ine matambudziko nekusarudzwa kwemakorokoto, mukufarira SHA2-256 .
Nekushandisa kweiyo algorithm SHA2-256 inovimbisa zvese kutonga kwekuvimbika kwemabhuroko data senge zvinyorwa mumakesi (info-duramazwi), iyo inoputsa kuenderana neDHT uye trackers.
Kunyangwe iko kushandiswa kweiyi algorithm ine matambudziko nemagnet zvinongedzo kune hova, ndosaka ne hash SHA2-256, chirevo chitsva chinokurudzirwa "Urn: btmh:" (kune SHA-1 uye nzizi dzakasanganiswa, shandisa "urn: btih:").
Sezvo iro hash rinoshanda kudarika kutyora protocol rutsigiro (munda une 32-byte hash panzvimbo pemakumi mabheti), kuvandudzwa kweBitTorrent v2 kududzirwa kwakatanga kuitiswa pasina hanya nekuenderana neshanduro dzakapfuura uye zvimwe zvakakosha zvekushandurwa zvakaitwa, senge kushandiswa kweMerkle hash muti mumakesi kudzikisa saizi yemafaira erukova uye block-level yevhisheni yedataunodhi.
Iko shanduko muBitTorrent v2 zvakare inosimbisa iyo Shanduko yekusunga yakaparadzaniswa hashi miti kune yega yega faira uye isa kurongeka kwefaira muzvikamu .
Uyewo zvinoratidzwa kuti kugona kwekukodha dhairekitori murukova kwakagadziridzwa uye optimizations zvakawedzerwa kugadzirisa nhamba hombe yemafaira madiki.
Zvakare, kutsetsenura kugarisana yeshanduro BitTorrent v1 uye BitTorrent v2, zvinokwanisika kugadzira hybrid mafaira erwizi izvo zvinosanganisira, mukuwedzera kune zvivakwa zvine SHA-1 hashes, indexes ine SHA2-256.
Iyi nzizi dzakasanganiswa dzinogona kushandiswa nevatengi vanongotsigira chete BitTorrent v1.
Chekupedzisira, zvinotaurwawo mune zvinyorwa zveiyi vhezheni itsva iyo rutsigiro runotarisirwa rweWebTorrent protocol mu libtorrent 2.0 yambomiswa kudzamara inotevera vhezheni chakakosha, icho chavanotaura kuti hachizoburitswa kusvika mukupera kwegore (kana zvese zvikaenda sezvakarongwa) nekuda kwezvinhu zvisina kugadziriswa kugadzikana.
Uye iwe unofanirwa kurangarira izvo kubatanidzwa WebTorrent chikumbiro mune libtorrent raibhurari icha bvumidza iwe kutora chikamu mukuparadzira zvemukati kwete chete kuburikidza nevashanyi vewebhusaiti vashanyi, asiwo kuburikidza nevamiriri verukova vatengi vanoshandisa iyo libtorrent raibhurari, kusanganisira Mafashama uye qBittorrent (rTorrent haigadzirise shanduko sezvo ichishandisa raibhurari yakasiyana yeibtorrent).
Naizvozvo, ndizvo vanogona kuumba masystem masystem nevatori vechikamu vanokwanisa kudyidzana nemambure akavakirwa paBitTorrent uye WebTorrent.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyo noti yeiyi nyowani yakaburitswa vhezheni yeraibhurari raibhurari, unogona kutarisa ruzivo nekuenda kune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » libtorrent 2.0 vhezheni inotyora kuenderana uye kunonoka WebTorrent
Sezvandakaverenga kumwe kunhu, Google nguva pfupi yadarika yakaputsa SHA-1 protocol nechisimba, ndosaka nharaunda yakamhanyira kutamira kuSHA-256.
PineTab, kunonoka kwayo, uye muenzi asingatarisirwe anonzi mutero